भोज जाने बहानामा ‘टाप’ : RajdhaniDaily.com
Homeप्रदेशभोज जाने बहानामा ‘टाप’
४२ वर्षअघि घरको साँघुरो घेरा तोडेर निस्केकी थिइन्, उनी । बहाना थियो, भोज जाने । २०३६ सालतिरको घटना आज ४२ वर्ष भइसक्यो । भोजको बहानामा निस्कने ती पात्र थिइन्, अष्टलक्ष्मी शाक्य ।
अष्टमीको दिन जन्मिएकाले नाम पनि अष्टलक्ष्मी राखियो । २०१० सालमा सम्पन्न परिवारमा जन्मिएकी उनको परिवार सुन व्यवसायमा संलग्न थियो । शाक्यको परिवारले बनाएका गरगहना दरबारमा समेत लगिन्थ्यो । तर, उनी भने कहिल्यै गरगहना, सुखसयल र समृद्धिमा खुम्चिइनन् ।
एसएलसीपछिको खाली समय उनी अध्ययनका लागि चिनियाँ पुस्तकालय जान्थिन् । परिवार र परिधिभित्रको शिक्षाभन्दा खुल्ला विश्वविद्यालयकै कारण उनको विचारधारा फराकिलो बनायो । जतिबेला उनी चिनियाँ पुस्तकालय धाएर अध्ययन गर्न थालिन्, त्यसैबेलादेखि राजनीतिप्रति चासो बढ्यो । १६ वर्षकै उमेरमा २०२६ सालबाट सामान्य राजनीति सुरु गरिन्, अष्टलक्ष्मीले ।
राजनीति सुरुवात बसन्तपुरस्थित चिनियाँ पुस्तकालयबाटै भयो । चिनियाँ साहित्य अध्ययन गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीले ‘सबैलाई बराबरी गर्छ’ भन्ने विषयले तान्यो, उनलाई । घरमा छोराछोरीबीच गरिने भेद्भाव देखेकी उनलाई समानताले यसरी आकर्षित ग-यो कि आज पनि उनी त्यसैमा घोत्लिरहन्छिन् ।
राजनीतिमा सक्रिय भएकै कारण घरबाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाउँदै विवाहको कुरा छिनेपछि उनी भागिन् र भूमिगत भइन्, २०३६ सालमा । परिवारलाई ढाँटेर बेखबर भएकी उनै अष्टलक्ष्मी आज नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेकी छन् । भूमिगत समय शाक्य २०४५ सालमा इलामका पक्राउ परिन् । अखिल नेपाल महिला संघ अध्यक्ष शाक्य निरन्तर पार्टीमा सक्रिय नेतृ हुन् ।
चुनौती चाङ लागेको बेला मुख्यमन्त्री
परिवारको सहमतिबिना २०३६ सालबाटै भागेर राजनीतिमा सक्रिय अष्टलक्ष्मी केही दिनअघि बाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री नियुक्त भइन् । २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र ८ ‘क’बाट उनी निर्वाचित भएकी थिइन् ।
पहिलो चुनावपछि नै शाक्य मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना भए पनि एमालेभित्रको गुटसंघर्षका कारण त्यो अवसरबाट बञ्चित थिइन् । बाग्मती प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेकी शाक्य प्रदेशमा बहुमत प्राप्त एमाले संसदीय दलको चुनाव जित्दै मुख्यमन्त्री बन्ने अनुमान धेरैले गरे । तर, राजनीतिक माहोल त्यसो भएन । नवौं महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाल समूहबाट एमाले उपाध्यक्ष जितेकी शाक्य नेपाल समूहबाट छुटिएपछि मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरिन् ।
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा छोटो समयका लागि मुख्यमन्त्रीको चिठ्ठा परेपछि उनीमाथि धेरै चुनौती छन् । ‘समय १६ महिना जति मात्रै बाँकी छ, यसो भएको हुनाले केही चुनौती र केही अवसर देखेकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘पहिलो बजेट नै हो, चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट पास भइसकेको छ, यसअघिको बजेटबाट भएका राम्रो कामबारे समीक्षा गरेर काम अब सुरु गर्छु ।’
बाग्मती प्रदेशका १३ जिल्ला अत्यन्त सम्भाव्यता बोकेको जिल्ला हुन् । विकासका राम्रा सम्भाव्यता छन्, यहाँ । आँट गरेर योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने कुनै पनि अभाव र समस्या झेल्न नपर्ने शाक्यको विश्लेषण छ । भन्छिन्, ‘बस्, सबैको साथ आवश्यक छ । साथ भए सबै चुनौती अवसर बन्ने छन् ।’
स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र
नियुक्ती भएको भोलिपल्टै बसेको क्याबिनेट बैठकमा एकमात्रै एजेण्डा बन्यो : कोभिड । कोभिडबाट ‘नागरिकलाई कसरी बचाउन सकिन्छ ?’ यसै विषयमा शाक्यको ध्यानाकर्षण हुनपुग्यो । ‘खोप अपर्याप्तता छ । केही अव्यवस्था व्यवस्थित गर्नुपर्छ । बाढीपीडितको अवस्थाप्रति पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । सिन्धुपाल्चोकलगायतको पीडितको अवस्था एकदम दयानीय छ,’ शाक्य भन्छिन्, ‘घरबारविहीनको अवस्था पीडादायी छ, पुल भत्किएर वारीको वारी पारीको पारी हुनुपरेको पीडा दर्दनाक छ । उहाँहरू सरकारले केही गर्ला भन्ने आशा बोकेर बस्नुभएको छ, पीडा बोकेर बस्नुभएको छ । उहाँहरूका लागि केही गर्नुपर्छ ।’
उनका नजरमा सुशासन कायम, भ्रष्टचार अन्त्य, अनियमितताविरुद्धको लडाईं बाँकी नै छन् । ‘विकास निर्माणका नियमित योजना त छ“दै छ, केही चुनौती छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘पार्र्टी यो अवस्थामा पुगेको छ, जसले नमज्जा लागिरहेको छ, पार्टीको कारण दुःख लाग्छ, अब पार्टीभन्दा पनि जनताका लागि मैले योजना बनाउनुपर्छ ।’
धेरै पटक हल्ला अहिले सुटुक्क मुख्यमन्त्री
शाक्य मुख्यमन्त्री बन्ने हल्ला विगतमा पटकपटक भए । तर, हल्लामै सीमित रहे । योपटक अपर्झट कुरो बाहिर आयो । पार्टीको हलचल त केही लामै हो, मुख्य कुरा बाग्मती प्रदेशमा ‘किन यस्तो भयो ?’ भन्ने सवाल अहिले पनि चर्चामा छ । केन्द्रीय राजनीतिमा जे जस्तो देखिएको छ । यसले पार्टीले दुःख गरेर आर्जेको फल, मेहनत गरेर ल्याएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र संविधानलाई बलियोभन्दा पनि कमजोर बनाएको शाक्यको विश्लेषण छ ।
उनको विचारमा राजनीतिमा एकजुट भयो भने नै मुलुकले कायापलट गर्नसक्छ । ‘विकासका लागि राजनीतिक सहमति र प्रष्ट ‘भिजन’साथ अघि बढ्न कुनै अप्ठ्यारा छैनन्, पार्टीभित्र बेमेल, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, गुटगत गतिविधि, एकापसमा मिल्नै नसक्ने घमण्ड र दम्बले नै नोक्सान पु-याउँछ,’ उनी भन्छिन्, ‘सबैलाई सम्मान गर्ने, समेटेर लैजाने, त्यो खालको लचकता, फराकिलोपन देखिएन ।’
लामो समय विभाजित भइरहेकै कारण धेरै अवसर गुम्न पुगेको र राजनीतिक वातावरण कमजोर हु“दै गएको बताउ“छिन्, शाक्य । ‘लोकतन्त्र कमजोर बनायो, जनतामा निराशा बढायो, अनेकै चलखेल बढे । एकताबद्ध हुने अवस्था नै देखिएन,’ शाक्यले भनिन्, ‘यहाँभित्र केही चुनौती छन्, अप्ठ्यारा छन् । अब यो चुनौती कसै न कसैले त समाना गर्नैपर्छ, सबै पछाडि हट्ने हो भने कसरी लोकतन्त्र जोगाउँछौ ? कसै न कसैले त हिम्मत देखाउनैपर्छ, अनि यो कमद अगाडि सारेकी हुँ ।’
महिलाका खातिर योजना
शाक्य यसअघि पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भएकी थिइन् । जतिबेला उनी आन्दोलनमा थिइन्, विषय महिला नै थियो । अखिल नेपाल महिला संघ अध्यक्ष भएको नाताले पनि उनको मुख्य पाटो महिला नै थियो र आज पनि छ । ‘मेरो आन्दोलनको विषय महिला, सबैभन्दा बढी समय खर्चिएको विषय महिला आन्दोलन, अनि म आफैं पनि महिला भएको कारण महिलाको इस्यु बिर्सने त कुरै भएन,’ शाक्य भन्छिन्, ‘महिला कति पीडित, कति दमित, कति दुःखपीडा सहेर बसेका छन् भन्ने बुझेकी छु ।’
अहिले संविधानमा महिला विषयमा जे व्यवस्था भएको छ, त्यो आफूहरूको आन्दोलनकै उपलब्धि भएको उनको दाबी छ । त्यो सयम अनेमसंघले विभिन्न ८ एजेण्ड पारित गरेको उनले स्मरण गरिन् । नागरिकता विषय, पितृ सम्पत्तिमा समान हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला हिंसा अन्त्य, कुप्रथा परम्परा अन्त्य, सामाजिक न्याय, विभेदकारी कानुन अन्त्य गरेर कानुनी रूपमा महिला सुरक्षित हुनुपर्नेजस्ता विषय तथा बेजिङ सम्मेलनबाट पारित १२ एजेण्डा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एजेण्डामा उनीहरूको दबाब थियो, त्यसबेला ।
आज पनि यीमध्ये केही व्यवहारमा लागू गराउन बाँकी नै रहेको शाक्य बताउ“छिन् । पितृ सोचका कारण महिला आज पनि पीडित रहेको बताउने शाक्य महिलाकै विषय बोकेर आन्दोलमा होमिएकी छन् । ‘महिला हितका लागि अब पनि मेरो लगाव हुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले सिंगो नेतृत्व ममाथि भएपछि महिलासँगै सबै नागरिकको सवाल सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी काँधमा छ ।’
संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र बाग्मती प्रदेशको हकमा आफ्नो नेतृत्वले ‘छोटो समयमा कति सकिन्छ, त्यो गरेर देखाउने’ उनको प्रतिबद्धता छ । घरपरिवार, समाज सबै ठाउँमा महिलालाई कमजोर रूपमा हेर्ने गरिएकाले यो सोच बदल्नु नै चुनौतीपूर्ण रहेको शाक्यको ठम्याइ छ ।
‘राजनीतिक व्यवस्थामा यति ठुलो परिवर्तन भयो तर सोच अझै बदल्न सकिएको छैन, परिवारभित्र अझै महिला बलात्कार भइरहेका छन्, महिला बेचबिखन हुन्छन्, किन ?’ शाक्य भन्छिन्, ‘घरपरिवारबाट महिलापुरुष समान छन्, छोराछोरी समान छन् भन्ने चेतना आवश्यक छ । चेतनाकै स्तरमा काम गर्न अझै बाँकी छ । सामन्ती व्यवस्था अन्त्य भयो राजतन्त्र अब छैन । तर, सामन्ती सोच घरघरमा हावी छ । अन्याय, अत्याचार, दमन र शोषण गर्ने सोच सबै ठाउँमा छ ।’
‘पदका लागि विचार साटेको हैन’
माधवकुमार नेपाल पक्षधर शाक्यले ओली पक्षमा गएर मुख्यमन्त्री पद लिइन् भन्ने आरोप प्रत्यारोप सतहमा छ । तर, शाक्य भन्छिन्, ‘म नेतृत्वलाई अपमान गर्न सक्दिनँ, सबैले दुःख बुझेर आउनुभएको छ, त्याग गरेर आउनुभएको छ । तर, यतिखेर आएर जस्तो सोच राख्नुपर्ने हो त्यो देखिएन ।’
मुलुक, कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि, लोकतन्त्र गणतन्त्रका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्न्पर्ने बेला मन साँघुरो बनाएकामा उनको गुनासो छ । ‘मन फराकिलो गरौं, कसैले कसैलाई निषेध नगरौं भन्ने सोच नेतृत्वले राख्नुपर्ने त्यो देखिएन,’ भन्छिन्, ‘पारिवारिक सदस्य नमिलेको घर र मिलेर बसेको घरमा कति फरक हुन्छ ? टोलछिमेकले गर्ने मर्यादा, घरभित्रको मित्रतामा कति फरक हुन्छ ? पार्टी भनेको पनि घर नै है । अहिले धेरै नमज्जा भएको छ ।’
व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बेला फुट्नु राम्रो नभएको उनी सुनाउ“छिन् । ‘त्याग भन्ने कुरा नि हुन्छ नि, यो प्यानल, त्यो प्यानल हैन, संस्कारयुक्त कम्युनिस्ट पार्टीका लागि मेरो मत हो,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकता जरुरी छ, यता र उताभन्दा पनि म एकताको पक्षधर हुँ, प्राप्त उपलब्धी रक्षा गर्ने बेला फुटेको पटक्कै ठीक लागेको छैन ।’
जनतालाई धैर्य गर्न आग्रह
यतिबेला राजनीतिक अस्थिरता देखेर नेपाली जनतामा निशारा दिक्दारीपन बढेको हुनसक्ने आकलन गर्छिन्, शाक्य । राजनीतिमा अविश्वास बढेको बताउँदै उनले ‘लोकतन्त्र बेकारको रहेछ’ भन्ने सोच आउनसक्ने औंल्याइन् । ‘जनतालाई शान्ति, विकास, समृद्धि चाहिएको छ, यो बेला राजनीतिक अस्थिरता देखेर आत्तिनुभएको हुनसक्छ, जुन स्वभाविक पनि हो,’ उनी भन्छिन्, ‘नआत्तिनुहोला, समय आउँछ भन्न चाहन्छु । लोकतन्त्र भनेको विचारको तन्त्र हो, फरक विचार आउनु स्वाभाविक हो भनेर बुझिदिन आग्रह छ । सकारात्मक विचार नै महत्वपूर्ण हुन्छ । आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई सहयोग गरिदिन र धैर्यता राख्न अनुरोध छ ।’
युवतीलाई एसिड आक्रमण गर्ने दुईजना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको सीतापाइलामा युवतीमाथि एसिड आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा रौतहट लक्ष्मीपुर घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका डल्लु बस्ने...
नेपालगञ्ज । बाँकेमा एक वडा अध्यक्ष सहित १२ जनाले नेकपा एस रोज्दै सनाखत गरेका छन् । बाँकेमा १२ जना जनप्रतिनिधिले नेकपा एस रोजेको जिल्ला...
यूरोकप: नकआउट चरणको समीकरण पूरा
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिने भीम, आचार्य आजै मुख्यमन्त्री बन्दै